Tselatra (NewsMada) | AEMW
Olona iray maty, telo naratra mafy. Io no vokatry ny fanafihan-dahalo nitranga tao amin’ny kaominina Analamitsivalana Mahabo, omaly vao maraina be. Araka ny loharanom-baovao voaray, mbola naka vehivavy telo sy ankizikely takalon’aina ireo malaso. Lasan’ireo dahalo nandritra ny fanafihana ny omby ampolony maro tao amin’io tanàna io. Nanao fanamiana mpitandro filaminana sy nitondra basy Kalachnikov ireo dahalo araka ny fanazavan’ireo niharam-boina. Nisy ny fifandonana teo amin’ireo dahalo sy ny fokonolona satria tsy nanaiky lembenana ireo niharan’ny fanafihana. Nanara-dia avy hatrany koa ny mpitandro filaminana taorian’izay ka nisy tamin’ireo omby no efa tafaverina tamin’ny tompony.
Canot de sauvetage iray no hita natopatopan’ny ranomasina tao Vatomandry, afakomaly. Tsy nisy olona na entana nitaingina izy. Nidina tany an-toerana nitarika azy ho an’ny seranan-tsambon’i Toamasina kosa ireo tompon’andraikitra tao amin’ny seranan-tsambo. Nisy ny fanadihadiana ny amin’ny toerana nilatsahan’izy ity sy ny sambo nitondra azy.
Olona roa maty raha roa hafa kosa naratra mafy vokatry ny lozam-piarakodia tao anelanelan’i Sakaramy sy Andohan’Ilakaka, ny alahady teo. Fiara marika Citroen iray no nivoaka ny lalana vokatry ny fandehanana mafy ka nivadika tany amin’ny ilany havia. Potika tanteraka ilay fiara. Nalefa any amin’ny hopitalin’Ihosy ireo naratra.
← Double meurtre à Sainte-Marie : Cinq suspects dont un Français et deux femmes malgaches ont été placés en garde à vue après le meurtre de deux Français à Sainte-Marie. (NewsMada)
Fiahiahiana fanodinkodinam-bola : hadinin’ny Bianco ny ben’ny Tanànan’Ambohimahamasina (NewsMada) →